Filtrer les éléments par date : jeudi, 11 juillet 2019
jeudi, 11 juillet 2019 19:55
Gasy Jiaby: Firaisan-kina hanohanana ny Barea
Fandraisana anjaran'ny Gasy Jiaby amin'ny firaisankina entina hanohanana ny ekipan'ny Barea amin'ny hiatrehany ny lalao ampahefadalana amin'ny CAN.
Fanentanana maro samihafa niarahana tamin'ny mpanao gazety, mpanankanto, mpiasan'ny ministera samihafa, fiarahamonim-pirenena, olon-tsotra, ireo vondron'ny olona samihafa.
jeudi, 11 juillet 2019 19:47
Kitra – CAN 2019: Ambiansy hatrany Espaina
Hatrany Espaina ny mpankafy sy mpanohana Barea
jeudi, 11 juillet 2019 19:44
Azali Assoumani, Filohan’i Kaomôro: Niarahaba manokana an'ny Barea an'i Madagasikara
Namoaka tweet niarahaba manokana an'ny Barea an'i Madagasikara ny filohan’i Kaomôro, Azali Assoumani, amin'ny naha tafakatra ny ekipam-pirenena Malagasy amin’ny baolina kitra ho amin'ny ampahefa-dalana amin’ny fiadiana ny amboaran’i Afrika.
"Reharehan'ny aty amin'ny Ranomasimbe Indianina ianareo" hoy izy ka mirary soa amin'izay rehetra ho tohiny.
jeudi, 11 juillet 2019 16:05
Madagasikara # Tonizia: Harahina amin’ny « Ecran géant » eo amin’ny « Parvis » Analakely
Nametraka « Ecran géant » eo amin’ny « Parvis » ny fiadidiana ny Tanànan’Antananarivo hahafahan’ny besinimaro manaraka mivantana ny lalao ampahefa-dalana amin’ny fiadiana ny amboaran’i Afrika amin’ny baolina kitra, hifandonan’i Madagasikara amin’i Tonizia anio alina.
Masoivoho Amerikanina: Nanao horonantsary fohy fanohanana ny Barea
Ny ambasadaoro Michaël Peter Pelletier mihitsy no mitarika ny mpiara-miasa ao amin’ny Masoivoho Amerikanina manao « Alefa Barea », ho fiaraha-mientana amin’ny fanohanana ny Barea an’i Madagasikara, hiatrika ny lalao ampahefa-dalana amin’ny fiadiana ny amboaran’i Afrika amin’ny baolina kitra.
Hikatroka ao amin’ny Kianja Al Salam ao Le Caire-Egypta, anio amin’ny 10 ora alina, ora eto Madagasikara, i Madagasikara sy Tonizia. Hifandona amin’i Sénégal amin’ny manasa-dalana izay tafavoaka mpandresy eo amin'ny 14 jolay ho avy izao.
(Sary nalaina tamin'ny horonantsary amerikanina)
jeudi, 11 juillet 2019 15:48
Moramanga: Raikitra ny « Rallye Mangoro 2 »
Nanomboka izao tolakandro izao ao Moramanga ny « Rallye Mangoro » andiany faha-2. Dingana faha-4 amin’ny fiadiana ny tompondakan’i Madagasikara amin’ny fanamoriana fiarakodiana izy ity.
30 ny ekipazy nandray anjara, amin’ny halaviran-dalana 404,83 km, ka sedra manokana na « épreuve spéciale » miisa folo ny 141,72 km amin’io.
Atao izao tolakandro izao ny sedra manokana roa amin’ireo. Haharitra telo andro ity « Rallye Mangoro 2» ity.
(Sary: Na Soanaivo)
jeudi, 11 juillet 2019 15:15
jeudi, 11 juillet 2019 15:13
Masoivoho Koreana Tatsimo: Ambiansy Barea
Andro miavaka ao amin’ny Masoivoho Koreana Tatsimo amin’ity anio ity. Miara mirona amin’ny fanohanana ny ekipam-pirenena malagasy amin’ny baolina kitra, hiatrika lalao ampahefa-dalana anio alina ny mpiasa tarihin’ny ambasadaoro Lim Sang-Woo. Manako ny « Alefa Barea ».
(Sary: Masoivoho Koreana Tatsimo)
jeudi, 11 juillet 2019 13:49
Alarobia-Antananarivo: Fanorenana tsy nahazoana alalana
Nolavin'ny « Conseil d'Etat » nandritra ny fandinihina nataony ny 10 jolay 2019 ny fangatahan'ny tompon'ny asa fanorenana tsy nahazoana alalana, amin'ny tanin'ny Ministeran’ny Asa Vaventy eo Alarobia-Antananarivo, mba hanafoanana ny didy manidy izany toerana izany.
Didy laharana 11 251/2019 navoakan'ny ministeran’ny fanajariana ny tany, trano fonenana ary ny Asa vaventy, ny 3 jona 2019 mandidy ny hanidiana tanteraka io toerana io. Fanorenana tsy nahazoana alalana no antony namoahana io didy io, ary tany tsy ananana taratasy maha tompony azy no antony tsy nahazoana izany alalana izany.
jeudi, 11 juillet 2019 13:37
Arsidiosezin’Antananarivo: Hatao eo Mahamasina ny fanamasinana ho Eveka an'i Mompera Andriantsoavina Jean Pascal
Hatao eo amin’ny kianjaben’i Mahamasina amin’ny alahady 11 aogositra izao, ny fanamasinana ho Eveka an'i Mompera Andriantsoavina Jean Pascal. Vao notendren'ny Papa Fransoa ho Eveka mpanampy eto amin'ny Diosezin'Antananarivo ity farany.
Pretra diosezanina eto Antananarivo izy, efa « Recteur » ny seminera zokiny fandalinana filozofia tao Antsirabe teo aloha, ary efa « Curé » ao amin’ny Fiangonana “ Notre Dame de l’Assomption ” Imerinafovoany Antananarivo.